Multiverse of Madness မော်ကွန်းတိုက်မှ Dr. Strange Brick Fanatics
19 / 10 / 2021 19 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 54 Views စာ0မှတ်ချက် 2022, Ant-Man နှင့် Wasp: Quantumania, Black က Panther, အနက်ရောင် Panther II, ထာဝရက Black Panther Wakanda, နှောငျ့နှေး, နှောင့်နှေး, ဆရာဝန်ထူးဆန်း, အရူးဖြစ်၏ ဟူ. ၎င်း၏ Multiverse အတွက်ဆရာဝန်ထူးဆန်း, Lego, Lego 2022, Lego မှ marvel, Lego ကောလာဟလ, Lego ကောလာဟလများ, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, ရုပ်ရှင်တွေ, ကောလာဟလာ, ကောလာဟလများ, အဆိုပါ Marvels, Thor, Thor: အချစ်နှင့်မိုးကြိုး
09 / 10 / 2021 09 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 104 Views စာ0မှတ်ချက် Batman, Black က Panther, ထာဝရက Black Panther Wakanda, Dc, ဆရာဝန်ထူးဆန်း, အရူးဖြစ်၏ ဟူ. ၎င်း၏ Multiverse အတွက်ဆရာဝန်ထူးဆန်း, Lego, Lego Batman, Lego DC က, Lego မှ marvel, Lego ကောလာဟလ, Lego ကောလာဟလများ, Marvel, Marvel စတူဒီယို, ကောလာဟလာ, ကောလာဟလများ, အဆိုပါ Batman, Thor, Thor: အချစ်နှင့်မိုးကြိုး, Wolverine
20 / 09 / 2021 21 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 351 Views စာ0မှတ်ချက် 2022, ထာဝရက Black Panther Wakanda, အရူးဖြစ်၏ ဟူ. ၎င်း၏ Multiverse အတွက်ဆရာဝန်ထူးဆန်း, Lego, Lego 2022, Lego မှ marvel, Lego ကောလာဟလ, Lego ကောလာဟလများ, Marvel, ကောလာဟလာ, ကောလာဟလများ, အဆိုပါ Marvels, Thor ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်မိုးကြိုး
19 / 08 / 2021 20 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 311 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Agatha Harkness, Avengers: Ultron ၏ခေတ်, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, Avengers: Infinity စစ်ပွဲ, Baron Strucker, Captain America နှင့် Winter Soldier, Captain America: ပြည်တွင်းစစ်ကြီး, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney, အရူးဖြစ်၏ ဟူ. ၎င်း၏ Multiverse အတွက်ဆရာဝန်ထူးဆန်း, မွေခှေး, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, သေးသေးလေး, Pietro Maximoff, Quicksilver, Scarlet စုန်းမ, ဝမ် Maximoff, WandaVision, X-Men
17 / 08 / 2021 18 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 277 Views စာ0မှတ်ချက် 76162 အနက်ရောင်မုဆိုးမရဲ့ရဟတ်ယာဉ် Chase, 76176 ဆယ်ကွင်းမှလွတ်မြောက်, 76177 ရှေးကျေးရွာမှာတိုက်ပွဲ, Black ကမုဆိုးမ, ဒီဇိုင်နာအင်တာဗျူး, အရူးဖြစ်၏ ဟူ. ၎င်း၏ Multiverse အတွက်ဆရာဝန်ထူးဆန်း, နိစ္စထာဝရ, ဝါသနာရှင်မီဒီယာနေ့များ 2021, Infinity Saga, Jesper Nielsen, Lego, Lego Batman, Lego DC က, Lego ဒီဇိုင်နာ, Lego ဝါသနာရှင်မီဒီယာ, Lego မှ marvel, Lego Spider-Man, Mark Stafford, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Marvel စတူဒီယို, Shang-Chi နှင့်ဆယ်ပါးလက်စွပ်၏ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများ, Spider-Man, Spider-Man: ဝေးမူလစာမျက်နှာ မှစ., Spider-Man: အိမ်သို့, Spider-Manဖြေ - အိမ်မှာမရှိဘူး, အဆိုပါ Batman, အဆိုပါ LEGO Group, Warner Bros.
13 / 08 / 2021 13 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 281 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76060 Doctor Strange ၏ Sanctum Sanctorum, ၇၆၁၉၀ Iron Man: Iron Monger Mayhem, 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, 76200 Bro Thor ရဲ့ New Asgard, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, Captain America, Captain America: The First Avenger, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, ဆရာဝန်ထူးဆန်း, အရူးဖြစ်၏ ဟူ. ၎င်း၏ Multiverse အတွက်ဆရာဝန်ထူးဆန်း, Lego, LEGO စုဆောင်း Minifigures 71031 Marvel စတူဒီယို, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, Marvel, သေးသေးလေး, Peggy ကို Carter, အနီရောင် ဦး ခေါင်းခွံ, စတိဗ်ရော်ဂျာ, အဆိုပါ LEGO Group, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
02 / 07 / 2021 19 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 572 Views စာ0မှတ်ချက် 76184 Spider-Man Mysterio's Drone Attack vs., 76185 Spider-Man အဆိုပါ Sanctum အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ, 76195 Spider-Man's Drone Duel, ဆရာဝန်ထူးဆန်း, အရူးဖြစ်၏ ဟူ. ၎င်း၏ Multiverse အတွက်ဆရာဝန်ထူးဆန်း, Lego, Lego မှ marvel, Lego Spider-Man, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, နစ်ခ် Fury, Samuel L. Jackson လည်း, Spider-Man, Spider-Man: ဝေးမူလစာမျက်နှာ မှစ., Spider-Man: အိမ်သို့, Spider-Manဖြေ - အိမ်မှာမရှိဘူး, အဆိုပါ LEGO Group
11 / 12 / 2020 11 / 12 / 2020 ခရစ် Wharfe 800 Views စာ0မှတ်ချက် ပုရွက်ဆိတ်-Man, Ant-Man နှင့် Wasp: Quantumania, Black က Panther, အနက်ရောင် Panther II, ကပ္ပတိန် Marvel 2, အရူးဖြစ်၏ ဟူ. ၎င်း၏ Multiverse အတွက်ဆရာဝန်ထူးဆန်း, Fantastic Four, Lego, Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ 2, Marvel, Marvel စတူဒီယို, ဒေါ်။ Marvel, အဆင့် 4, Shang-Chi နှင့်ဆယ်ပါးလက်စွပ်၏ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများ, Thor: အချစ်နှင့်မိုးကြိုး, ဗွီဒီယိုဂိမ်း
21 / 07 / 2019 21 / 07 / 2019 ဂရေဟမ် 1059 Views စာ0မှတ်ချက် Black ကမုဆိုးမ, ဓါးရွက်, အရူးဖြစ်၏ ဟူ. ၎င်း၏ Multiverse အတွက်ဆရာဝန်ထူးဆန်း, Fantastic Four, က Galaxy Vol ၏အုပ်ထိန်းသူများ။ 3, Lego, Lego မှ marvel, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, Mutant, San Diego မှရုပ်ပြ Con 2019, San Diego မှရုပ်ပြ -con, SDCC, Shang-Chi နှင့်ဆယ်ပါးလက်စွပ်၏ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများ, ထာဝရ, Thor: အချစ်နှင့်မိုးကြိုး